२ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब राजश्व संकलन, अर्थमन्त्रीले भने - 'सरकारले सेवा घरदैलोमै पुर्‍याएको छ'
Wed, Jun 3, 2020 at 10:06pm
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष ३७ प्रतिशतले बढी राजश्व संकलन भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा जानकारी
मंगलवार, २ असोज २०७५,	आहाखबर	1.03K
चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको २ महिना अर्थात साउन १ देखि भदौ मशान्तसम्मको अवधिमा १ सय २० अर्ब राजश्व संकलन भएको जानकारी गराएका हुन् ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खर्च बढी भएपनि सरकारले लक्ष्यअनुसार भने वृद्धि भने गर्न सकेको छैन । अघिल्लो महिनाको तुलनामा भने खर्च बढेको छ । साउन महिनामा २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा भदौमा वृद्धि गरि एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको हो।
एक खर्ब तीन अर्ब मध्ये ९६ अर्ब चालु खर्च र ६ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो रकम सरकारले चालु वर्षको लागि विनीयोजन गरेको रकमको सात प्रतिशत मात्रै हो। गत वर्ष यो समयमा ५६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा एक खर्ब २० अर्ब राजश्व उठेको छ।
संघीय सरकारले ८३१ अर्बको राजश्‍व संकलन लक्ष्य राखेकोमा दुई महिनामा १४ प्रतिशत राजश्‍व उठाउन सफल भएको हो । राजश्व संकलन सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । गत महिनामा सरकारले ६२ अर्ब ६३ रुपैयाँ राजश्‍व उठाएकोमा गत महिनाको तुलनामा राजश्‍व संकलन भने घटेको छ।
सरकारले कर सेवालाई घरदैलोमै पुर्‍याएको, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाएको, अनुगमन बलियो बनाएको, भन्सारमा कडाई गरेकोलगायतका कारण राजस्व बढेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
अघिल्लो वर्ष चालु भन्दा पूँजीगत खर्च धेरै भएको उनले बताए । तर, अघिल्लो वर्षसँग यसवर्ष तुलना भने गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा भएको खर्चको तथ्यांक पनि केन्द्रमा नै थियो, यस वर्ष छैन’ उनले भने, ‘उताबाट तथ्यांक नआएसम्म भन्न सकिँदैन र तुलना गर्न पनि नमिल्ला ।’